အဆိုပါပြဿနာကိုမင်းမျိုး၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုဖြေရှ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ပြင်ပ Paint Render
နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့အဆင်းလှသောအစ်မအိမ်အပြင်ပန်
ပြည်တွင်းအိမ်များအများစုဟာပြီးသားအိမ်တော်အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုမလိုအပ်ပါပြီ။ အိမ်သူအိမ်သားတစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့တည်ခဲ့ပြီးသောကြောင့်, အိမ်တော်အပြင်မြို့ရိုးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြီးထွားလာခဲ့ပြီး, နှင့်ဘိလပ်မြေအလွှာဖွဲ့စည်းပုံမှာတဖြည်းဖြည်းအဟောင်းနှင့်အဖြူဖြစ်လာသည်နှင့်များစွာသောနှောင့်အယှက်ပြဿနာများစားပွဲပေါ်မြင့်တက်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်အိမ်နှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာလည်းမရှိဆိုပါကစစျဆေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? သင့်ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားအိမ်၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုမလိုအပ်ပါဘူးကြောင်းအတည်ပြုရန်ဘယ်လိုနေသလဲ? အခြေခံအားဖြင့်, သင်မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အက်ကြောင်းရှိပါတယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ပြင်မြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်နှင့်အတွင်းမြို့ရိုးကိုမျက်နှာပြင်ကနေတိုက်ရိုက်စောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ အတွင်းမြို့ရိုးကိုဒါကိုတော့ကျနော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာ၌လေ့လာတွေ့ရှိစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ပြင်မြို့ရိုးကိုအက်ကွဲအတွက်မဆိုအက်ကွဲရှိသလော ပြင်တန်တိုင်းရိုး၌အက်ကြောင်းမကြာခဏဆောက်လုပ်ရေးကာလအတွင်းမြေငလျင်သို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုဆောက်လုပ်ရေးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်အဘယ်သူမျှမကအထူးအသိပေးစရာရှိသောကြောင့်, အက်ဆစ်မိုး, ဤနေရာတွေကနေများ၌စတင်ထရံကိုတိုက်စား, အဲဒီနောက်အတွင်းပိုင်းနံရံပေါ်ကမြို့ရိုးကိုကင်ဆာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုလေးနက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပါသည်
ပုံစံ - 6-1-07
အိမ်တော်အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုလျှောက်ထားသည့်အခါ,ပထမဦးဆုံးအရာမွို့ရိုးကိုသန့်ရှင်းရေးများနှင့်ဂရုတစိုက်မဆိုအက်ကြောင်းထုတ်ပေးပါကစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်.တစ်ဦးအက်ကွဲလည်းမရှိဆိုပါက,ကအက်ကွဲပြုပြင်စီမံကိန်းကိုအဖြစ်လျှောက်ထားရပါမည်.အဘယ်ကြောင့်ပြင်၏ထက်ဝပြောစွာနေသည်?အထွေထွေအဆာမွငျ့မားခွငျးအားဖွငျ့ပွငျ၏ဖြစ်ပါသည်-ဖိအား perfusion မွှုပျထအေးဂျင့်,အလျင်အမြန်ဒါကိုတော့ပြုပြင်နိုင်ဖြစ်ဟန်အရာ.တကယ်တော့,မှိုအမြစ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားတစ်ချိန်တည်းမှာသန့်စင်ကြသည်မဟုတ်.ထိုကွောငျ့,ChengLin မြင့်မားကိုအသုံးပြုသည်-ထို့နောက်ဖိအားသန့်ရှင်းရေးနှင့် V ကိုတွင်ဖြည့်စွက်-ဖြတ်နည်းလမ်း,မြို့ရိုးအမျက်နှာပြင်လုံးဝဖွဲ့စည်းပုံမှာမှအပျက်အစီးမရှိဘဲဖယ်ရှားနေသည်,ပြီးတော့ပြုပြင်ကြ,ဝပြောစွာ,နှင့်ပြုပြင်ကြ,သန့်ရှင်း,waterproofed,နှင့်အနာ.
အက်ကြောင်း၏အဆာများအပြင်,အိမ်တော်ပြင်တန်တိုင်းရိုး၌ဖြေရှင်းခံရဖို့ပြဿနာကအုပ်ကြွပ်မြို့ရိုးကိုချွတ် peeled နှင့်ပျက်စီးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်,နှင့်အထွေထွေအုပ်ကြွပ်ချွတ် peeled နေကြတယ်,အဆိုပါ glaze ၏သစ်ကိုကြွပ်ညံ့ဖျင်းရောင်စုံအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်,သာသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစဝပြောစွာပါလျှင်,အသွင်အပြင်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏,သင်မူကားတစ်ခုလုံးကိုမြို့ရိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့လိုလျှင်,သငျသညျပထမဦးဆုံးသန့်ရှင်းရေးကြေးဖြုန်းရမယ်,အဆိုပါကုန်တင်ရှင်းလင်း,ထို့နောက် tile ကို၏ကုန်ကြမ်းများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ဖြုန်း,မကြာခဏအိမ်တအိမ်၏ကုန်ကျစရိတ်ဒါဟာ Wall’မတတ်နိုင်ဖို့ခဲယဉ်း့ကြောင့်’လက်လှမ်း့.